इन्धनको मूल्य बढ्यो, नयाँ भाउ कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
इन्धनको मूल्य बढ्यो, नयाँ भाउ कति ?
काठमाडों, माघ १९ । इन्धनको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले शनिबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको हो । निगमका अनुसार काठमाडौंका उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर थप दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको प्रतिलिटर मूल्य ९७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यो मूल्य समायोजनपछि निगमले १५ दिनमै एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउनेछ । निगमले हवाई ईन्धन र ग्यासको भाउ भने बढाएको छैन ।
ग्यास कारोबारमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ३३ रुपैयाँ घाटा छ । भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ ।